Explications en malgache laharana fahafolo amin' ny volana malagasy. Ny anarany dia nalaina avy amin' ny anaran' ny antokon-kintana izay ataon' ny Arabo hoe El-djadi (Chevreau).
Anaran' ny volana fahafolo amin' ny filaharan' ny volana malagasy merina, aorian' ny Alakaosy ary alohan' ny Adalo, ka ny toerana nomen' ny Ntaolo azy ao antrano dia eo amin' ny zorony avaratra andrefana (zorom-baravarankely). Ny Adijady dia andro mafy, tena mijadina mafy, ka ny zavatra tian-ko mafy sy mateza indrindra no isantarana amin' io
Explications en anglais The name of the tenth month in the Malagasy year. [Ar. Al-dschadiu - Capricorns.] [Richardson 1885]
Explications en français Nom de la dixième lune et du dixième mois de l'année malgache [Abinal 1888]
1 ny adijady amin' ny andrefana-avaratra, an-jorom-barava-ran-kely. [Rahajarizafy: Filozofia]
2 fa nony Asabotsy 28 Janoary, 11 Adijady dia namely mafy ny rivotra; [Cohen-Bessy: Rakotovao, page 226]
Explications en malgache zana-pehintany 23°27'30" atsimon'ny fehibe [SLP 1986]
Explications en français tropique du Capricorne [SLP 1986]
Explications en malgache [Taimoro] latsa, fanalikalikana, ompa [Rakotosaona 1975]
Mis à jour le 2021/07/22